စုထားတဲ့ငွေတွေ အလိမ်လိုက်ရတဲအဘိုးအို - JAPO Japanese News
သော 01 Nov 2019, 13:42 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အဘိုးအဘွားတွေကို ဦးတည်ပြီး ငွေလိမ်ယူတဲ့မှုခင်းတွေ အလွန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။ အရင်တုန်းကတည်းက ဒီလိုလိမ်လည်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုထိလည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတုန်းပါပဲ။ ဖုန်းထဲကနေ “အမေရေ ကျွန်တော်လေ ကျွန်တော်! ……” ဆိုပြီး သားဖြစ်သူရဲ့အသံကို အတုလုပ်ပြီး လိမ်ညာတဲ့နည်းပါ။
အခုနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ လိမ်နည်းအသစ်ကတော့ ရဲတစ်ယောက်ရဲ့အမည်သုံးပြီး လိမ်တဲ့နည်းပါ။
လက်တွေ့မှာ အဲဒီလိမ်နည်းနဲ့ ယန်း 370 သောင်းကို အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ အသက် 70 အရွယ်အဘိုးအိုရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ဖောက်သည်ချမယ်နော်။
ညနေခင်းတစ်ခုမှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်က သူ့ကိုယ်သူရဲသားတစ်ဦးပါ ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။
“ကျွန်တော်ဟာ ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ ဒီဒေသရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ အဖမ်းခံရလို့ လိုအပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ ကာကွယ်မှုတွေ လုပ်ဖို့အတွက် ဘဏ္ဍာရေးဌာနက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ရှင်းပြဖို့ ရောက်လာမှာဖြစ်တာကြောင့် သူရှင်းပြတာ နားထောင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းနံပါတ်နဲ့ လက်ကျန်ငွေပမာဏကို ပြောပြပေးလိုက်ပါ”
အဲဒီလို အချိန်ကိုက်မှာပဲ အခြားအမျိုးသားတစ်ယောက်က အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ အမျိုးသားက ကျွန်တော့်ကို “တစ်စုံတစ်ယောက်က မေးလာရင် အလိမ်မခံအောင်လို့ အရင်ဆုံးကတ်တွေအားလုံးကို ဒီစာအိတ်ထဲထည့်ထားပြီး လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုရေးပြီးသိမ်းထားပါ” လို့ပြောပါတယ်။
ရဲဌာနက အကြောင်းကြားပြီးနောက် ရောက်လာတဲ့လူဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီလူအပေါ် အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သွားမိတယ်။
အဲဒီအတွက် အမျိုးသားပြောတဲ့အတိုင်း စာအိတ်ထဲမှာ ကတ်တွေအားလုံးနဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုပါ ရေးပြီးထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အဲဒီစာအိတ်ကို ချိတ်ပိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် တံဆိပ်တုံးလေးပါ ယူလာပေးပါ ဆိုလို့ ကျွန်တော့် အခန်းထဲကို တံဆိပ်တုံးသွားယူတဲ့ကြားအချိန်လေးမှာ အမျိုးသားဟာ ကတ်ကိုအတုနဲ့ လဲထည့်ပြီး လျှို့ဝှက်နံပါတ်ရေးထားတဲ့ စာရွက်ကိုတော့ သူ့အိတ်ထဲထည့်ယူထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူဟာ ကျွန်တော်ယုံကြည်အောင် ငွေစုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းစဥ်အချို့ကို ဟိုဟိုဒီဒီ လုပ်ပြပြီး ပြန်သွားပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်သားပြန်လာတဲ့အခါမှာ ဒီအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်တော့ မသင်္ကာဘူးဆိုပြီး စာအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အခြားကတ်တစ်ခုကို အစားထိုးပြီးထည့်ထားတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ အပ်နှံထားတဲ့ငွေတွေအားလုံးကို အထုတ်ခံလိုက်ရပြီး တရားခံအကြောင်းကို သေချာမသိရသေးပါဘူး။
ရဲနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထမ်းက ဘဏ်ကတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးမယ် ဘာညာဆိုတာတွေဟာ တကယ်မရှိသလို ဘဏ်ဝန်ထမ်းက အိမ်အထိလာပြီး ဒီလိုကိစ္စတွေပြောနေပြီဆို ယုံကြည်လို့မရပါဘူး။
လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့ ပြောကြတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း စိတ်ချလို့မရတော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုလိမ်လည်မှုတွေ မကြုံရအောင် သတိထားကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။
Imma ဆိုတာ ဘယ်သူတဲ့လဲ ?
ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူတဲ့ လူယုတ်မာတစ်ချို့ !!!
အရသာရှိမယ့်ပုံပေါ်လို့ဆိုပြီး ပြင်သစ်သူလေးကို သတ်စားလိုက်သူ
အလွန်သစ္စာရှိတဲ့ ခွေးလေး ဟချိခို ( Hachiko )
စစ်မှန်တဲ့အချစ်ကိုလည်း သင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆာမူရိုင်းရဲ့ လမ်းစဥ် !!!!!!